Fampitomboana teti-bola :: Miandrandra tohana mafy avy amin’ ny governemanta ireo governora • AoRaha
Fampitomboana teti-bola Miandrandra tohana mafy avy amin’ ny governemanta ireo governora
Vita tamin’ny zoma 3 septambra lasa teo ny filankevitra manokana nandinihina ny tetibola ho an’ny faritra niarahan’ireo governora sy ireo ekipan’ny minisiteran’ny Toekarena sy ny fitantanam-bola, tarihin’ny minisitra Rabarinirinarison Rindra Hasimbelo, tany Mantasoa. Taorian’ny dinika teo amin’ny roa tonta dia nangataka ny mba hisian’ ny fanohanana an’ireo sosonkevitra naroson’ireo governora tsirairay hoentina mampandroso ny faritra iadidiany, tamin’ny minisitry ny Toekarena sy ny fitantanam-bola, izy ireo.
«Betsaka ny hetaheta ary ilaina koa ny fanampiana ny tetibola ampiasaina amin’ izany. Samy nandresy lahatra ny minisitra ireo governora rehetra mba hanao izay ho afany hanohana an’ny fanatanterahana an’ ireo tetikasa naroso nandritra an’ny fivoriana», hoy ny governoran’ny faritra Androy, Soja Tsimandilatse Lahimaro, omaly tamin’ny antso an-tariby. Hatolotra sy hodinihina mandritra an’ny Filankevitry ny minisitra avokoa ireo soson-kevitra voaangona, tany Mantasoa sy ireo efa voarafitra teo aloha. Hampidirina ao amin’ny tetibolam-panjakana 2022, rehefa vita izany.
Samy nanana ny hetahetany sy ny tetibola ilainy amin’izany ireo governora isam-paritra. Raha lany eo anivon’ny Filankevitry ny minisitra io tetibola mirakitra ny filan’ny isam-paritra io dia mbola handalo ny fankatoavan’ireo depiote eny amin’ny Antenimieram-pirenena ihany koa. Mety tsy hitovy, araka izany, ny tetibola hampiasaina isaky ny faritra izay tokony hifanaraka amin’ny fandaharanasa ankapo- ben’ny fanjakany. Notsorin’ny minisitra Rabarinirinarison Rindra Hasimbelo fa «anjaran’ny governora tsirairay no miady an’izay fampitomboana ny tetibolany izay».
Fanjifana foto-tsakafo :: Hisoroka ny fidangan’ny vidim-bary sahady ny Fanjakana
Fikatsahana fampandrosoana :: Miantso firaisan-kinan’ny Malagasy ny Filoha Rajoelina